2019 Hyundai Santa Fe 7-inch Display Protector 2019 Hyundai Santa Fe 7-inch Display Protector - LFOTPP
Home ngwaahịa 2019 Hyundai Santa Fe 7-inch Display Protector
LFOTPP na-agbaso àgwà dị mma maka akụkụ Hyundai, Ọhụụ anyị na-eme ka ndị mmadụ dịkwuo mma.
Ịgba 9H Hardness Anti-Explosion: Nrụpụta ihe na-agbawa agbawa, mgbagwoju anya, nwere ike ịmelata mmetụta, belata ncha, ọbụna ma ọ bụrụ na rupture agaghị emepụta mpempe akwụkwọ, dị mma iji ya.
◆ Mmiri na-emepụta mmanụ na mmanụ-Repellent: Mfe dị ọcha, mmiri na-ere ihe na mmiri na-emepụta mmanụ, ihe nkiri ahụ a na-agbanye n'ọkụ na-etinye mmanụ akwa mmiri. Mgbe ngebichi ahụ ruru unyi, a ga-enwetaghachi ya site na ihichapụ nwayọọ.
Ike elu dị elu: Ịrụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike, nkwụsị aka ntanetị anya 0, mmetụta aka karịa onye ọkwọ ụgbọ ala mbụ ahụ dị mma. Nnukwu ihe mmetụ aka, Ìhè na mkpa, dị mma ma dị mfe imetụ aka. Ihe nkiri anyị dị nro dị nnọọ mkpa ma na-agafe.
⑷ Mmetụta Na-emetụ Ahụ: A na-eme ka elu dị elu nke ntinye, nke nwere mmetụta dị mma na mmetụ aka. Ọ bụrụ na ị na-emetụ ihuenyo mbu, ọ gaghị emetụta ojiji ahụ.
⑸ Mfe Icha: Ihe nkedo nke mmiri na nke na-emepụta mmanụ, ihe nkiri ahụ a na-agbanye n'ọkụ na-agụnye oyi akwa mmiri. Mgbe ngebichi ahụ ruru unyi, a ga-enwetaghachi ya site na ihichapụ nwayọọ.
2018 2019 Hyundai Elantra 8-Inch Navigation Screen Protector
2015-2019 Hyundai Genesis G80 9.2-inch Nchedo ihuenyo Nchedo